Inona no azontsika antenaina amin'ny Apple amin'ny 2015? | Vaovao IPhone
Inona no azontsika antenaina amin'ny Apple amin'ny 2015?
Nacho | | iPhone 6s, iPhone 6s Plus, About us
Vitsy ny ora sisa tavela hanao veloma ny taona 2014, taona nandao antsika vokatra paoma vaovao tsy ampoizina raha ilaina izany. Miresaka marimarina momba ny iPhone 6 aho, fantsona iray izay nandritra ny fotoana honohono dia maro no heverina ho diso sy tsy azo atao, na izany aza, ny tsena ankehitriny dia niafara tamin'ny fanerena ny fandefasana maodely iPhone misy efijery lehibe kokoa.
Na dia isan-taona aza ny iPhone dia toa mitovy ihany saingy miaraka amin'ny fitaovana vaovao nohavaozina, ny iPhone 6 dia mandroso ary tsy vitan'ny fanatsarana fanatsarana amin'ny haavon'ny fitaovana ihany koa fa maneho koa fiovana mahery vaika amin'ny filozofia hitanay hatramin'izao. Niala tamin'ny tananay iray izahay ary nilanja 4,7 santimetatra farafahakeliny. Betsaka no tsara kokoa? Tsiro izany, tsotra izany. Hisy ny hevitra manamarina na mitsikera ity fepetra ity.
2015 dia efa nanomana fahagagana sy tsaho momba ny fahatokisana bebe kokoa na latsaka, noho izany antony izany, hanao isika avereno jerena izay ho hitantsika na ho hitantsika amin'ity taona ity dia hanomboka izany.
2 iPhone Mini
5 iPhone 6s, iPads vaovao, ...
Napetraka amin'ny lohataona 2015, ny Apple Watch mikendry ny hampivadika ny tsenan'ny smartwatch. Tsy fantatsika raha hahatratra azy ireo izy na tsia satria mbola tsy fantatra ny vidiny ary toa manana lesoka lehibe io taranaka voalohany io, indrindra fa ny haavon'ny fizakan-tena sy ny fanoherana ny rano, ka tsy afaka alentika.
Ny Apple Watch dia tsy hifanaraka afa-tsy amin'ny tontolo iainana ny orinasa paoma, izay mametra bebe kokoa ny volan'ny varotra ho an'ireo izay tsy manana iPhone. Na izany aza, mieritreritra aho fa izao dia sahy milaza izany ho fahombiazana izany nefa tsy nahita akory. Ny iPhone dia nanjary finday fantatsika androany noho ireo mpamorona ary amin'izao fotoana izao, misy tetikasa tena mahaliana eo amin'ny latabatra ho an'ny Apple Watch.
2015 dia mety ho ny fiverenan'ny a modely iPhone vaovao fa misy efijery kely kokoa. Raha mankasitraka an'i Sony aho amin'izao fotoana izao, dia ny fahalalana ny fomba fanolorana terminal ho an'ny mpampiasa amin'ny habe kely kokoa. Miresaka momba ny fianakaviana Xperia Z Compact aho, ohatra iray tokony hisy ny kinova 'mini' an'ny zokiny lahy, tsy misy fitaka. Famaranana avo miaraka amin'ireo litera rehetra.
Miloka labiera aho izay mihoatra ny iray ary mihoatra ny roa no maniry hahita iPhone 6 Mini, terminal efatra-metatra miaraka amin'ny fitaovana izay nankafizinay hatramin'ny volana septambra na dia noho ny politikam-bidy aza dia tsy mahita toerana sahaza an'ity iPhone Mini ity aho. Ny iPhone 599s dia mitentina 5 euro ary 100 euro mahery no ananantsika ilay iPhone 6-inch.
ihany ny vidiny no kely indrindra amin'ireo olana ho an'i Apple dia azo antoka fa hahita tetika mety izy ireo izay ahazoany tombony lehibe. Tsy maintsy tadidinao fotsiny ny hafetsen'ny epiko amin'ny fanesorana ny maodely 32 GB ary atolotra ny 64 GB ho an'ny 100 euro bebe kokoa raha oharina amin'ny kinova 16 GB.
Apple, asehonao hatrany izany ho anao Apple TV dia fialamboly fotsiny. Manana fitaovana ary manana ekosistema isika. Apple Store vaovao dia hanana tranombarotra fampiharana azy manokana, maninona raha manao izany miaraka amin'ny boaty efa napetraka?
Angamba io fepetra io dia mampiakatra ny vidin'ny fitaovana nefa raha ny marina, Aleoko Apple TV mahay kokoa amin'ny fitaovana mety amiko loatra amin'ny asa tsy voafaritra loatra ary azoko atao ny manisa amin'ny rantsan-tanako.
Apple dia mety tsy liana amin'ity tsena ity na tsy mahita mahomby fa raha te hiditra amin'ny fahitalavitra mpampiasa ianao, 2015 no tokony ho taona handosirana.
Ny iray amin'ireo fisalasalana lehibe amin'ity 2015 ity dia ny iTV. Tamin'ny 2014 izahay dia naely ny tsaho momba ity heverina fa ity paoma tvNisy aza ny resaka fifanarahana amin'ireo orinasa sy ireo mpanamboatra mety ho an'ny tontalin'izy ireo.
Ny marina dia ny tsaho rehetra efa hitantsika momba ilay orinasa, io no hitako fa tena sarotra inoana. Fantatro fa tsy mbola nifaninana tamin'ny ligin'ny vidiny i Apple fa ankehitriny kosa dia mandefa televiziona 55-inch ianao miaraka amina vahaolana 4K sy Apple TV mitambatra amin'ny vidiny lafo loatra, azo antoka fa hikapoka vongan-doha lehibe izy ireo.
Apple TV dia moraNa ny Apple Watch aza, raha manahirana ahy ianao dia hanana kinova ara-toekarena azonao atao amin'ny fotoana iray amin'ny taona an-tsitrapo, na izany aza, amin'ny fahitalavitra Smart izay eny an-tsena amin'izao fotoana izao dia sarotra ny manamarina izany famoahana izany.
Mazava fa raha tsy lafo izy ireo, ny vidin'ny iTV dia mifanaraka amin'ny fifaninanana mivantana indrindra, dia hanapotika ny tsena izy ireo. Tsy ampoizina hitranga izany fa Mianatra amin'ny lesoka isika ary misy ny iPhone 5c hanaporofoana izany. Raha fintinina dia mbola betsaka ny banga amin'ity iTV ity fa hilamina ny fotoana.
iPhone 6s, iPads vaovao, ...
Ireo no raikitra isan-taona, fantatrao. Amin'ny 2015 dia ho hitantsika ny iPhone 6s, iPhone 6s Plus ary, mazava ho azy, taranaka vaovao amin'ny iPad Air sy iPad Mini.
Apple dia nanjary azo vinavina mialoha Amin'ity lafiny ity dia saika hitantsika ny daty famoahana sy ny famaritana, na dia hamono ny tanantsika tsy ho ela aza izany. Ao anaty lalina isika rehetra mahalala izay hitranga fa hiandry ny fotoanan'ny tsaho sy ny fivoahana izahay vao azo antoka.
Raha mikasa ny hangataka amin'ny Three Kings ho an'ny fitaovana iOS ianao ho fanomezana dia ataovy izany ary ankafizo izy ireo satria manana fiainana be mialoha izy ireo. Adinoy ny iPhone na iPad amin'ny manaraka satria mbola lavitra ny lalana alohan'ny ahitantsika azy.
Ity dia eo ho eo no ho hitantsika na ho hitantsika amin'ny Apple amin'ny taona 2015. Ah, adinoko ny nanonona ireo Macs izay havaozina ihany koa mba hanao ny dingana mankany amin'ny sehatra fikirakirana Intel vaovao. Eto dia sarotra kokoa ny manome daty satria mandritra ny fotoana maharitra, ny fanavaozana dia mihoatra ny kely kokoa na dia marina aza fa amam-bolana alohan'ny matetika dia misy ny famantarana ny mety ho fandefasana.
Inona araka ny hevitrao no hanombohana an'i Apple amin'ny 2015?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 6s » Inona no azontsika antenaina amin'ny Apple amin'ny 2015?
alexcavia dia hoy izy:
Tsy homekit no resahinao fa ny fitaovana mifanaraka amin'ny homekit. Heveriko fa hanova trano izany.
Mamaly an'i alexcavia
MrM dia hoy izy:
Toy ny mahazatra ihany, tsy dia misy kalitao ary lafo kokoa ... izany no hataon'izy ireo amin'ny 2015
Valiny tamin'i MrM
JoseV dia hoy izy:
Te-hanome hevitra momba ny hevitry ny tsirairay sy ny antenain'izy ireo momba ny fitaovana elektronika paoma sy ny fifaninanana aminy aho. Avy any Venezoelà aho izay somary sarotra ny fahazoana fitaovana teknolojia ary miankina amin'ny fividianana elektronika an'i Amazon USA izahay na misy tsy mitondra azy ireo avy amin'ny firenena sasany. Tsy mitovy amin'ny hevitr'i MrM aho, manana entana paoma aho nanomboka tamin'ny 2007 ary azoko lazaina fa fitaovana tsara kalitao ireo raha oharina amin'ireo marika hafa izay manana fifaninanana matanjaka ankehitriny. Raha ny amiko dia hanome ohatra iray tiako aho "La Musica", hatramin'izao dia mbola tsy misy android (miala sasatra kely amin'i sony ho an'ny mpampandeha feo azy) izay maneno amin'ny haavon'ny kalitaon'ny iphone, ipod, mac, ipad , Efa nanandrana ny zava-drehetra aho ary manana ny fomba hanaovana izany, manana fitaovana HIFI avo lenta miaraka amin'ny tandroka JBL sy PolK Adio aho, ankoatry ny rafitra Bose # -2-1, headphone avo lenta, ary ny fahakingana, ny herinaratra , ny fisarahana amin'ireo fantsom-peo stereo ny haavon'ny fahatsapana sy ny habaka manodidina (projection of audio ao amin'ny tontolo iainana). Efa nanao fitsapana tamin'ny fitaovana B&W, Tanoy, Bose aho, ary tsy misy fahadiovana amin'ny feo ary bebe kokoa raha toa ka rehefa voarakitra amina kalitao avo tsy misy fatiantoka dia mahavariana. Ny matihanina sy ny besinimaro mihaino "mozika manara-penitra" dia saika mampiasa paoma foana mba tsy ho tafahoatra. Ohatra iray vao haingana ny fahazoako ny airportexpress, ny fampitana amin'ny WIFI amin'ireo fitaovana ampiasaiko dia avo lenta amin'ny fitaovako, misy tsy fahombiazan'ny fandefasana indraindray fa hitako fa lesoka tamin'ny fampifanarahana tamin'ny roter an'ny Cisco izany, nataoko izany fanandramana fanandramana mifandraika mivantana tsy misy fiarahana amin'ny fitaovana hafa (vakio ny fomba fiasan'izy io) sy ny fampiasana azy amin'ny fifandraisana ara-bola avy amin'ny RCA satria mahavariana ny FibraOptica. Izaho dia mampiasa azy io ao anatin'ny fiarako miaraka amina tandroka JVC sy Kicker misy kick kick ary miasa 100%. Ny olana tokana hitako dia ny Apple mametra ny mety ho fampitaovana ao aminy noho ny antony eny an-tsena, ny jailbreak ary ny fiarahamonina misy olona mahita asa vaovao na manatsara ny fahaiza-manao dia mahatonga ny fitaovana taloha toy ny iPhone 4S tena mahay amin'ny fitaovana maro ankehitriny, I tompony iray ary tena izy io dia workhorse ao amin'ny IOS 7.1.2. Tratry ny taona ho an'ny rehetra. Ny filazanao fa Apple dia mametraka sisintany fitaovana ratsy amin'ny tsy mitombina, ny varotra marobe sy mahomby amin'ny ankamaroan'ny fitaovana dia manamarina izany, miankina amin'ny mpampiasa farany izany. Saingy tsy maintsy misy zavatra mahamamo izay araky ny filazan'ny mpandalina ny fifandraisana ara-tsosialy maro dia maro fa ny ovy sy iPhones MacDonalds no entana lafo indrindra eran'izao tontolo izao. Ary saika tsy diso mihitsy izy ireo.
Valiny tamin'i JoseV
Ny mpampiasa sasany dia manana olana amin'ny fitehirizana karatra ao amin'ny Apple Pay